Kugadzira nzira imwe 1 huku chidya mapfupa akabviswa, wedzera 1/4 hanyanisi, 2 zvidimbu zvejiniga, 2 mashupuni ewaini yekubika, chidimbu checallion chena, simmer kwemaawa mashoma muhari yekushongedza, uye shandisa forogo kubaya zvisingaverengeke zvidimbu zvenyama nyama Gomba diki. 2.1 maaspuni eupfu mutema mhiripiri, 2 maspuniji ekubikisa waini, 1 kiyipuni yechiedza sosi muto, 2 mashupuni ewaini tsvuku, hafu yepuniki yepepuru nyowani tsva, 2 mashupuni eoyster muto, 1 kapuni yeshuga, ...
Yakanaka uye Sour Spare Ribs (Yakanaka uye Sour Spare Ribs) inomiririra yechinyakare dhishi ine inotapira uye yakasviba kuravira. Inoshandisa mbabvu nyowani nyowani sechinhu chikuru, nyama iri nyowani uye nyoro, uye ruvara rweyakapedzwa ndiro tsvuku uye inopenya. "Inotapira uye inovava" inonaka iyo ine ese makuru maChinese chikafu ane. Iyo inotapira uye inovava nyama yenguruve mbabvu yakatanga muZhejiang uye yakajairika Zhejiang dhishi. Iyo chaiyo inotapira uye inovava nyama yenguruve mbabvu yakanyanya kunyanya nezve nzira uye mu ...